နှင်းကျတာကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးလို့ သဘောတွေ ကျနေပြီး မိသားစုလေးနဲ့ နှင်းလေးတွေကြားမှာ သမီးလေးဆန့်ဆိုင်းကို ချီရင်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ‘အောင်လအန်ဆန်’ – Shwe Naung
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာဂုဏ်ဆောင် ‘အောင်လအန်’ ကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ချစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင် မှုကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ လက်ဝှေ့ အားကစားသမား တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ကို မြင့်တင်ပေးနေတဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန် ကတော့ အေးချမ်း သာယာပြီး ကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက် ထားနိုင်ခဲ့ ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေး ‘အောင်ဒီး’နဲ့ သမီးလေး ‘ဆန့်ဆိုင်း’ တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောင်လကတော့ လက်ဝှေ့လေ့ကျင့်မှုတွေ ကိုလည်း ပုံမှန်ပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီး ယခုမှာ ချစ်ရတဲ့ သားသမီးလေးတွေကို အချိန်ပေးလျက်ရှိ နေခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‘အောင်လအန်ဆန်’ကတော့ ယခုမှာ နှင်းကျတာကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးလို့ သဘောတွေ ကျနေတဲ့ ချစ်သမီးလေးဆန့်ဆိုင်းကို ချီရင်း မိသားစု လေးနဲ့အတူ နှင်းလေးတွေ ကြားမှာ ပျော်ရွှင် နေခဲ့ပါတယ်။ ‘အောင်လအန်ဆန်’တို့ မိသားစုလေးရဲ့ ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေး တွေဟာ မြင်ရသူ ချစ် ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
‘အောင်လအန်ဆန်’ ကတော့ “Foraman from Myanmar one day of snow is enough . San Seng got to experience snow for the first time and she loved it. “ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အတူ လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ‘အောင်လအန်ဆန်’တို့မိသားစုလေးရဲ့ နှင်းလေးတွေကြားမှာ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အောင်လအန်ဆန် ကတော့ အေးချမ်း သာယာပြီး ကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက် ထားနိုင်ခဲ့ ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေး ‘အောင်ဒီး’နဲ့ သမီးလေး ‘ဆန့်ဆိုင်း’တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။